State Counsellor receives Special Envoy of the Vietnamese Prime Minister Mr. Nguyen Quoc Dung – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar received Mr. Nguyen Quoc Dung, Special Envoy of the Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam and Deputy Foreign Minister on 28-1-2019, at 3:30 pm at the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw.
During the meeting, they frankly discussed matters on enhancing of Myanmar-Viet Nam bilateral relations and cooperation, Myanmar Government’s efforts for the repatriation of displaced persons from Rakhine State, humanitarian assistances provided by Government to all communities and the development of the Rakhine State.
After the meeting, Special Envoy of the Vietnamese Prime Minister donated US Dollars 100,000 from the Government of Viet Nam as humanitarian assistance in Rakhine State to the Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine. State Counsellor conferred the Certificate of Acknowledgement to the Special Envoy.
Also present at the meeting were Dr. Win Myat Aye, Union Minister for Social Welfare, Relief and Resettlement, U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation, Senior Officials from the Ministry of Foreign Affairs, Dr. Luan Thuy Duong and Representatives from Viet Nam.
The Special Envoy of the Vietnamese Prime Minister also paidacourtesy call to U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation at 12:45 pm on the same day and discussed matters pertaining to the further enhancement of cooperation between Myanmar and Viet Nam in regional cooperation mechanism including ASEAN and in international arena.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး မစ္စတာ ငုယင် ကွတ်ဇွန်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၈-၁-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၅၃၀ နာရီအချိန်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း မြန်မာ-ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများ ပြန်လည်လက်ခံနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အသိုက်အဝန်း အားလုံးအတွက် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ပေးအပ်ရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေသည့် အခြေအနေများကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ဗီယက်နမ် ဝန်ကြီးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးမှ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီအဖြစ် ဗီယက်နမ်အစိုးရမှ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့ရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းသို့ လှူဒါန်းငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ကို ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်သံအမတ်ကြီး ဒေါက်တာ လူသွေယောင်းနှင့် ဗီယက်နမ် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြ ပါသည်။
ဗီယက်နမ် ဝန်ကြီးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် ယင်းနေ့ နေ့လည် ၁၂၄၅ နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်အားလည်း ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာ-ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံအကြား အာဆီယံအပါအဝင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် ပိုမို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။